အချိန်လွန်မှ ဆွမ်းတော်စွန့်ခြင်းသည် ငရဲကြီးနိုင်ပါသလား? - Myanmar Media
အချိန်လွန်မှ ဆွမ်းတော်စွန့်ခြင်းသည် ငရဲကြီးနိုင်ပါသလား?
အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မမေးချင်တာလေးရှိလို့ပါဘုရား အရှင်ဘုရားဖြေပေးမယ်ဆိုရင် တကယ်ကို ဝမ်းသာမိမှာပါဘုရား။ တပည့်တော်မတို့က အလုပ်ကို မနက်အစောကြီးသွားညမိုးချုပ်မှပြန်ရောက်ပါတယ်ဘုရား။ အလုပ်မသွားခင်မှာ ဆွမ်းတော် နဲ့ သောက်တော်ရေချမ်းကိုအမြဲကပ်လှူပါတယ်။ ညမိုးချုပ်ပြန်ရောက်မှပဲစွန့်ရပါတယ်ဘုရား။ အဲ့ဒီ့အတွက် တပည့်တော်မ စိတ်ထဲမတင်မကျဖြစ်မိပါတယ်။ ပြန်ရောက်မှစွန့်ရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်မရ ငရဲရမှာကြောက်ပါတယ်ဘုရား။ မိုးချုပ်မှ စွန့်ကောင်းလား။ မစွန့်ကောင်းလား သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ (ပန်းအိမ်စံ)
လူတွေမှာ ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ထားပါလျှင် ညစာမစားရပါဘူး။ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ဆွမ်းတော်တင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၂နာရီမကျော်ခင်စွန့်ပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မစွန့်နိုင်ပါလျှင် အိမ်မှာရှိသူတစ်ဦးဦး အား စွန့်ခိုင်းစေချင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် ရုံးမသွားခင် အရုဏ်ဖြစ်ဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ချက်ပြုတ်ပြီးစီး လျှင်သော် လည်းကောင်း ဆွမ်းတော်တင်ပြီး ရုံးသွားခါနီးစွန့်နိုင်ပါတယ်။ ဒကာမ။
ညနေထိတော့ မထားကောင်းပါ။ အရုဏ်ဆွမ်းကပ်လျှင်လည်း အရုဏ်တက်မှသာ ကပ်ကောင်းပါ၏။ အရုဏ်မတက်ဘဲ ကပ်ပါက ညဆွမ်းလိုဖြစ်ပြီး အပြစ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အရုဏ်တက်ချိန်က လစဉ်ပြောင်းလဲလေ့ရှိသဖြင့် အနည်းဆုံး လစဉ် နံနက် ၅း၃၀ လောက်ကပ်မှ သင့်တော်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄း၃၀ ၄း၄၀ ၅နာရီစသည်ဖြင့် အရုဏ်တက်ချိန် လစဉ်ပြောင်းလဲ လေ့ရှိသည်ကို သတိပြုအပ်၏။
ထို့ကြောင့် မယုတ်မလွန် လစဉ် နံနက် (၅း၃၀) နာရီဆိုပါလျှင် ကပ်မည်ဆိုပါက လစဉ်လတိုင်း အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အကယ်၍ (၄း၃၀)ကို လစဉ်လတိုင်းကပ်မည်ဆိုပါက (၅)နာရီ၊ (၅း၁၀)နာရီ စသည့်ဖြင့် အရုဏ် တက်သည့်လများတွင် ကိုယ်က (၄း၃၀) လစဉ်လတိုင်းကပ်မိပါက ညဆွမ်းလိုဖြစ်ပြီး အပြစ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။
အချုပ်အားဖြင့် နေ့ဆွမ်းဆိုလျှင် နေ့လည် ၁၂ နာရီ မထိုးခင် စွန့်သင့်ပြီး အရုဏ်ဆွမ်း ဆိုပါလျှင် ရှေ့လွတ်၊ နောက်လွတ် (၅း၃၀) နာရီ လောက် ကပ်သင့်ကြောင်း ဖြေကြားလိုက်ပါသည်။ သစ်သီးဆွမ်းများကိုလည်း ထိုနည်းအတူမှတ်ပါ။ ရှေးက မသိခဲ့လို့ မစွန့်မိတာကို စိတ်ထဲ စွဲလန်းမထားဘဲ ယခုသိလိုက်သည့်အချိန်တွင် နောက်မလုပ်မိအောင်သာ ဂရုစိုက်ပါ။ သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍ လိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝတည်းပြည့်ဝပါစေ။
အရှငျဘုရားတပညျ့တျောမမေးခငျြတာလေးရှိလို့ပါဘုရား အရှငျဘုရားဖွပေေးမယျဆိုရငျ တကယျကို ဝမျးသာမိမှာပါဘုရား။ တပညျ့တျောမတို့က အလုပျကို မနကျအစောကွီးသှားညမိုးခြုပျမှပွနျရောကျပါတယျဘုရား။ အလုပျမသှားခငျမှာ ဆှမျးတျော နဲ့ သောကျတျောရခေမျြးကိုအမွဲကပျလှူပါတယျ။ ညမိုးခြုပျပွနျရောကျမှပဲစှနျ့ရပါတယျဘုရား။ အဲ့ဒီ့အတှကျ တပညျ့တျောမ စိတျထဲမတငျမကဖြွဈမိပါတယျ။ ပွနျရောကျမှစှနျ့ရတဲ့အတှကျကုသိုလျမရ ငရဲရမှာကွောကျပါတယျဘုရား။ မိုးခြုပျမှ စှနျ့ကောငျးလား။ မစှနျ့ကောငျးလား သိခငျြပါတယျဘုရား။ (ပနျးအိမျစံ)
လူတှမှော ရှဈပါးသီလဆောကျတညျထားပါလြှငျ ညစာမစားရပါဘူး။ ထို့ကွောငျ့ မွတျစှာဘုရားရှငျကို ဆှမျးတျောတငျတာ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၁၂နာရီမကြျောခငျစှနျ့ပါလို့ အကွံပွုပါတယျ။ ကိုယျတိုငျမစှနျ့နိုငျပါလြှငျ အိမျမှာရှိသူတဈဦးဦး အား စှနျ့ခိုငျးစခေငျြပါတယျ။ သို့မဟုတျ ရုံးမသှားခငျ အရုဏျဖွဈဖွဈသျောလညျးကောငျး၊ ခကျြပွုတျပွီးစီး လြှငျသျော လညျးကောငျး ဆှမျးတျောတငျပွီး ရုံးသှားခါနီးစှနျ့နိုငျပါတယျ။ ဒကာမ။
ညနထေိတော့ မထားကောငျးပါ။ အရုဏျဆှမျးကပျလြှငျလညျး အရုဏျတကျမှသာ ကပျကောငျးပါ၏။ အရုဏျမတကျဘဲ ကပျပါက ညဆှမျးလိုဖွဈပွီး အပွဈဖွဈနိုငျပါသညျ။ အရုဏျတကျခြိနျက လစဉျပွောငျးလဲလရှေိ့သဖွငျ့ အနညျးဆုံး လစဉျ နံနကျ ၅း၃၀ လောကျကပျမှ သငျ့တျောမညျဖွဈပါသညျ။ ၄း၃၀ ၄း၄၀ ၅နာရီစသညျဖွငျ့ အရုဏျတကျခြိနျ လစဉျပွောငျးလဲ လရှေိ့သညျကို သတိပွုအပျ၏။
ထို့ကွောငျ့ မယုတျမလှနျ လစဉျ နံနကျ (၅း၃၀) နာရီဆိုပါလြှငျ ကပျမညျဆိုပါက လစဉျလတိုငျး အဆငျပွမေညျဖွဈပါသညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော အကယျ၍ (၄း၃၀)ကို လစဉျလတိုငျးကပျမညျဆိုပါက (၅)နာရီ၊ (၅း၁၀)နာရီ စသညျ့ဖွငျ့ အရုဏျ တကျသညျ့လမြားတှငျ ကိုယျက (၄း၃၀) လစဉျလတိုငျးကပျမိပါက ညဆှမျးလိုဖွဈပွီး အပွဈဖွဈနိုငျသောကွောငျ့ ဖွဈပါ သညျ။
အခြုပျအားဖွငျ့ နဆှေ့မျးဆိုလြှငျ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီ မထိုးခငျ စှနျ့သငျ့ပွီး အရုဏျဆှမျး ဆိုပါလြှငျ ရှလှေ့တျ၊ နောကျလှတျ (၅း၃၀) နာရီ လောကျ ကပျသငျ့ကွောငျး ဖွကွေားလိုကျပါသညျ။ သဈသီးဆှမျးမြားကိုလညျး ထိုနညျးအတူမှတျပါ။ ရှေးက မသိခဲ့လို့ မစှနျ့မိတာကို စိတျထဲ စှဲလနျးမထားဘဲ ယခုသိလိုကျသညျ့အခြိနျတှငျ နောကျမလုပျမိအောငျသာ ဂရုစိုကျပါ။ သကျရှညျကနျြးမာစိတျခမျြးသာ၍ လိုရာဆန်ဒမြားတဈလုံးတဈဝတညျးပွညျ့ဝပါစေ။